“Ninkii Laga Dheereeyoow ina Ilaali oo xaq-dhawr codka dadweynaha” | Somaliland.Org
Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland Md. Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa baaq dar-daaran ah u jeediyay Axsaabta siyaasadda, Gudiyada diiwaan gelinta, Komishanka iyo dadweynaha.
Guddoomiyuhu wuxuu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay xafiiskiisa, waxaanu yidhi “Waa maalin hawleed waa maalin dheer, waana maalin adag. Inshaalaahu ILAAHAY nabadda wuu ina wada waafajin doonaa.dadweynaha Somaliland waxaan leeyahay codkiina bixiya, waa waajib ina wada saaran cidii aad idinku rabtaan codkiina siiya nabad-gelyaddana inoo wada ilaaliya,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Guurtidu.
Md. Saleebaan Maxamuud waxa uu u soo jeediyay ururadda doorashada laga adkaado inay xaq dhawraan codka dadweynaha, waxaanu yidhi “Aan qaranimaddeena Ilaashano dadweynoow. Waxaan leeyahay ururadda oo aan ka codsanaynaa inay deganaansho iyo xasilooni ku galaan doorashadda. Dabcan waa la kala dheeraynayaa sadex uun baa soo hadhaya, waar ninkii laga dheereeyoow ina ilaali oo maxaa la iiga dheereeyay ha odhanin? Laba qof haddii ay tartamaan mid baa dheeraynaya waxaan leeyahay aan xaq dhawrno codka dadweynaha.”
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay inaanay jirin wax la boobayaa, waxaanu ku dooday inay Somaliland illaa maanta si wanaagsan u waddo hirgelinta hanaanka doorashadda.
“Komishanka Doorashooyinka iyo Gudida diiwaan-gelintuba waa xaqsooreyaashii waa kuwii inoo xaqsoorayay. Wax dhibaato ah oo aanu ka sheegano ma hayno,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu waxaanu intaasi ku sii kaabay “waxaan leeyahay Komishanka wixii la idiinka bartay ayaa la idiinka fadhiyaa. Gudida diiwaan gelintana waa loo soo bislaynayaaye’e ha ku dhawaaqeen natiijadda waxa laga rabaa Gudida doorashooyinka iyo muraaqibiintaba dedaal dheeraad ah.”
Sidoo kale, Guddoomiyaha aqalka odayaashu waxa kale oo uu maamul goboleedka Puntland ugu baaqay inay xaqdhawrto Somaliland, waxaanu yidhi “Waxaan Puntland leeyahay laba dal oo daris ah ayaynu nahaye’ aynu is xaq-dhawrno. Haddii aad na xaq-dhawri waydaan cidna kama taag roonidin. Waxaan leeyahay waxaad moodaa inay u tafo-xayteen inaanay doorashadani ka dhicin dalka. Waxaan leeyahay naga daacaya doca-docaynta.”
Previous PostAgaasimaha Cisbitaalka Berbera oo ka hadashay dhaawacyadda 20 qof oo ku dhaawacmay shil baabuurNext PostMadaxweyne Siilaanyo Oo Khudbad Dheer Warbaahinta u mariyay Shacbiga	Blog